Thwebula WPS Office 12.7.1 isizulu – Android – Vessoft
AndroidIhhovisiIsofthiwe yehhovisiWPS Office
Isigaba: Isofthiwe yehhovisi
Ikhasi elisemthethweni: WPS Office
I-Wikipedia: WPS Office
WPS Office – isofthiwe ukusebenza namaphepha nezinhlobo ezahlukene. Isofthiwe ikuvumela ukudala imibhalo umbhalo, amaspredishithi, izethulo noma amanothi evamile. WPS Office isekela iningi takhiwo ifayela, kuhlanganise PDF futhi Microsoft Office takhiwo. Isofthiwe iqukethe wonke amathuluzi adingekayo ngomsebenzi kwansuku namaphepha. WPS Office ikuvumela ukuba uvule amafayela agcinwe kule storages ezahlukene ifu. Futhi isofthiwe isekela ukuphrinta of amafayela ngokusebenzisa ukuxhumana okungenawaya.
Inani elikhulu amathuluzi
Thwebula WPS Office
Amazwana ku WPS Office
WPS Office software ehlobene
I-Microsoft Excel – isoftware yokusebenza ngamaspredishithi avela kuMicrosoft. Isoftware inebanga lamathuluzi nezici ezahlukahlukene zokuhlela amadokhumenti ahambisana ngokuphelele namanye amadivaysi.
I-Microsoft PowerPoint – isofthiwe elula ukuyisebenzisa ukusebenzisana nezethulo. Isoftware isekela inani elikhulu lamathuluzi wokwakha ikhwalithi yokwethulwa.
I-Microsoft Word – enye software ethandwa kakhulu ukwakha nokuhlela amadokhumenti. Isoftware isekela imisebenzi eminingi ehlukene futhi inohlelo lokuphatha olusetshenziselwe amadivaysi e-Android.
Notebook Electronic eklanyelwe ukwakha uhlu, ukufingqa, amanothi kahle mayelana noma ngekhanda.